musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » NASA aviation tech kuchengetedza nguva yevafambi venhandare
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Tekinoroji yekuronga kubhururuka kwendege yakagadziriswa neNASA iyo ichakurumidza kunatsiridza kuvimbika kune vafambi.
Mutungamiri weNASA, Bill Nelson, akashanyira Orlando International Airport muFlorida neChitatu ndokusangana nevatungamiriri vendege kuti vakurukure nezve tekinoroji yekuronga kubhururuka nendege yakagadziridzwa nesangano iro richakurumidza kuvandudza kuvimbika kune vatyairi - izvo zvinonyanya kukosha panguva dzekufamba kwepamusoro senge zororo rekutenda.
MunaSeptember, tekinoroji yakaedzwa panguva NASA's Airspace Technology Demonstration 2 (ATD-2) yakaendeswa kune Federal Aviation Administration (FAA). Nhandare dzendege dzakakura munyika yose - kusanganisira Orlando International - ichakurumidza kuita tekinoroji. Nelson akakurukura nezvekuchinjisa tekinoroji neGreater Orlando Aviation Authority CEO Phil Brown.
"NASAkubatana ne Faa inogara ichipa vanhu vekuAmerica, ichivandudza mashandiro eindasitiri yendege yenharaunda uye vafambi munyika yese, ”akadaro Nelson. "Tekinoroji yedu yekuronga ndege, iyo inoita kuti vashandi vakwanise kuronga mafambiro endege pavanenge vari panhandare yendege, ichakurumidza kubatsira kuona kuti vafambi vakawanda vaburuka pasi vodzokera kumba kuzororo nekukurumidza uye zvakanyanya kupfuura nakare kose. ”
NASA uye Faa akapedza anoda kusvika makore mana ekutsvagisa uye kuyedza kuverenga gedhi pushbacks kuburikidza nenguva-based metering panhandare dzendege dzakabatikana, kuitira kuti ndege dzigone kuumburuka dzakananga kunzira yekubhururuka uye kudzivirira tekisi yakawandisa uye kubata nguva, kuderedza kushandiswa kwemafuta, kuburitsa, uye kunonoka kwevafambi.
“Patinotumira software iyi, ruzivo rwekufamba runoita nani kune vafambi nguva yese iyo kubuda kwendege kuchiderera. Kuhwina,” akadaro Faa Mutungamiri Steve Dickson. "NASA inoramba iri mubatsiri akakosha mukuedza kweFAA kuvaka hurongwa hwekufamba nendege."
Iyo FAA inoronga kuendesa tekinoroji yeNASA yekutarisa metering kutanga kunhandare dzendege makumi maviri nenomwe, kusanganisira Orlando International, sechikamu chekudyara kwakakura mutekinoroji yekutonga kweairport inonzi Terminal Flight Data Manager (TFDM) chirongwa. Kuvandudza kushanda nesimba uye kusimuka kwekumirira nguva kubva kunzira yetekisi kuenda kugedhi inochengetedza mafuta, inoderedza kuburitswa, uye inopa vendege nevatyairi kuchinjika munguva isati yabuda gedhi.
"Kuburitswa kunofungidzirwa kweTFDM yakagadziridzwa muna 2023 inoenderana nefungidziro yedu yekudzokera kune pre-denda vafambi traffic gore rimwe chetero," Brown akadaro. "Izvi zvakagadziridzwa zvinofanirwa kuita kuti veruzhinji vafambe zvakanaka uye vawedzere 'The Orlando Chiitiko' chatinovavarira kupa mazuva ese panhandare yendege yedu yepanyika."
Chikwata cheNASA cheATD-2 chakatanga kuisa tekinoroji yavo yekuronga ndege pakuyedza nevashandisi vepasi rese munaGunyana 2017 paCharlotte-Douglas International Airport. Pakazosvika Gunyana 2021, maturusi akabatanidzwa ekusvika nekusimuka (IADS) akange achengeta marita anodarika miriyoni imwe yemafuta ejeti. Kuchengetedzwa ikoko kwakaitwa nekudzikisira jet injini kumhanya nguva, izvo zvinoderedzawo mari yekugadzirisa uye kuchengetedza ndege dzinosvika madhora miriyoni 1 mumitengo yevashandi vendege. Pakazara, vafambi vakaponeswa maawa 1.4 mukunonoka kwendege uye vakachengetedza inofungidzirwa $933 miriyoni mukukosha kwenguva.